Muuri News Network » Beesha Habar-gidir oo Been & Fadeexad isku dartay Ciidanka Amisom. (Akhri)
Beesha Habar-gidir oo Been & Fadeexad isku dartay Ciidanka Amisom. (Akhri)
Imaam Cabdulaahi Khaliif Rooble Af ku dhiigle, oo kasoo jeeda beesha habar Gidir ayaa sheegay in ciidamada AMISOM hub badan ku taageereen beesha Biimal.taasina ay sii hurisay dagaalka Marka ka socdo, sida uu sheegay.
Amisom waxay hub siisay beel ka mid ah beelihii ku dagaalamay Magaalada Marka. Waxaan cadaymo u haynaa in Amisom ay rasaas ku taageertay beeshaasi.” Ayuu yiri Imaam C/laahi Khaliif Rooble AF ku dhiigle.
Dhinaca kale imaam Cabdulaahi Khaaliif Rooble Af ku dhiigle, ayaa ku dhaliilay dowlada Soomaaliya ineysan qaadan kaalintii looga baahnaa ee ku aadan joojinta dagaalada kusoo noq noqday deegaanada Shabeelaha Hoose.
Masuuliyad darro iyo dayacaad ayaa jirta. Meelaha ay ka taliso Dowladda maxay beeluhu ugu wada dagaalamaan. Maxay ku dhacday in Magaalada Marka oo Amisom ay joogto in lagu dagaalamo? Maxay u kala dhex geli la’dahay beelaha ku dagaalamaaya?” Ayuu yiri Imaam C/laahi Khaliif Rooble Af ku dhiigle .
Ugu dambeyn Imaamka ayaa wuxuu sheegay in dowlada Soomaaliya looga baahan yahay iney dadaal rasmi ah u gasho sidii loo joojin lahaa dagaalada qabiilka ku saleysan ee kusoo laablaatay Marko iyo deegaanada Shabeelaha Hoose.